आजको राशिफल – मिति वि.सं. २०७३ साल कार्तिक ३० गते मंगलबार तदानुसार इश्वी सन् २०१६ नोभेम्बर १५ तारिख – ZoomNP
आजको राशिफल – मिति वि.सं. २०७३ साल कार्तिक ३० गते मंगलबार तदानुसार इश्वी सन् २०१६ नोभेम्बर १५ तारिख प्रकाशित मिति: मङ्गलवार, कार्तिक ३०, २०७३ समय - १:५५:१२ मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) –
आर्थिक पक्ष सबल नै छ, यद्यपि समय बलियो छैन । गहना, कपडा वा धातुको कुनै वस्तु खरिद गर्दा राम्ररी मोलतोल गर्नु होला । मातापिता, मान्यजन वा विशिष्ट व्यक्तिसँग विवादको सम्भावना पनि छ । इष्टमित्रको जिम्मेबारी वहन गर्नु पर्नेछ । गरेका काममा सोचेजति सफलता प्राप्त हुने सम्भावना छैन । व्यापार, व्यवसायबाट लाभ मिल्नेछ । बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) –
आफ्नै घरमा चन्द्रमाको उपस्थिति भए पनि समय त्यत्ति भरपर्दो छैन । श्रममूलक काममा निकै खट्नु पर्ने समय छ । व्यवहारिक समस्याले सताउन सक्छ । बन्दव्यापार र पेसा÷व्यवसायमा सफलता नै मिल्ने समय छ । भोगविलास र मनोरञ्जनका क्षेत्रमा खर्च गर्न मन आकर्षित बन्नेछ । नयाँ काम गर्ने सोच पलाउन सक्छ, तर कार्यान्वयन पक्ष जटिल छ । मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) –
व्यवसायिक जीवन यथावत रहने छ । व्ययस्थानमा चन्द्रमा रहेकाले काममा लगानीको समय छ । चुनौतीका बाबजुद नसोचेको काम बन्न सक्छ । धैर्यले काम लिने समय छ । छर–छिमेकमा भने केही असमझदारी बढ्ने योग छ । प्रतिस्पर्धाबाट फाइदा उठाउन सकिने छ । वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ लिने मौका छ । अनावश्यक यात्राबाट जोगिनु राम्रो हुन्छ । कर्कट (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) –
आर्थिक रूपमा सबल हुनुहुनेछ, कारोबारमा गतिशीलता आउने छ । विपरीतलिङ्गीबाट आवश्यक सहयोग मिल्नेछ । पठनपाठनमा प्रगति हुनेछ, नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने योग छ । पछाडि कुरा काट्ने शत्रु आफैं पराजित हुनेछन् । सामाजिक कार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका वहन गर्नु पर्नेछ, जसबाट प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ । प्रेममा उच्च सफलता प्राप्त हुने योग छ । सिंह (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) –
प्रयाससाध्य समय छ धैर्य गरी मिहिनेत गरेमा कार्यसिद्धि हुनसक्छ । प्राविधिक काममा सफलता प्राप्त हुने छ । आत्मविश्वास जाग्नेछ । अभिभावकको आशीर्वादले काम गर्नसक्छ । हाकिम वा विशिष्ट व्यक्तिको विचारले प्रभावित तुल्याउन सक्छ । श्रममूलक काममा मन जानेछ । व्यवसाय बढाउने वा नवीन रोजगारीको अवसर आउने छ । कन्या (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) –
नयाँ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन मुस्किल पर्ला । आफूलाई कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ । पढाइलेखाइमा पनि प्रगति गर्न नसकिने र व्यापार व्यवसायमा समेत सोचेको फाइदा नउठ्ने देखिन्छ । निराश नहुनुहोस्, केही समय पर्खंदा स्थितिमा सुधार आई अवश्यै उन्नति हुनेछ । आस मारेको काम बन्नाले उत्साह जाग्नेछ । सानो प्रयत्नले ठूलो काम सम्पादन हुनेछ । तुला (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) –
धन, धर्म र भाग्यमा हानी पुग्ने सम्भावना छ । गर्नु नपर्ने काम पनि बढी समय लगाएर गर्नु पर्ला । अप्रिय समाचार सुन्नु पर्दा मन खिन्न हुने स्थिति आउने छ । तपार्इंको व्यक्तिगत दृष्टिकोण उल्टो हुने देखिन्छ । प्रतिकूल समयले घेरेको छ, संयम रहनु होला । सानातिना काम र घरेलु समस्यामा नै आजको समय व्यतीत हुनेछ । बृश्चिक (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) –
रसरङ्ग र मनोरञ्जनको चाहना पूर्ण गर्ने समय आएको छ । तर दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य चिसोपन देखिन सक्छ । घरायसी वातावरण र बालबच्चाको क्रियाकलापले समय लिनसक्छ, संयम भई व्यवहारिक काममा जुटेको राम्रो हुन्छ । यात्रामा सोचेजस्तो रमाइलो पाउन सकिंदैन । आर्थिक पक्ष सबल नै देखिन्छ । खानपानको समयमा फेरबदल हुने सम्भावना छ । धनु (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) –
तर्क, विवाद र प्रतिस्पर्धाबाट लाभ हुने छैन । मनमा अशान्ति र छटपटी व्याप्त हुनेछ । सहयोगी हातहरू पछि हट्न सक्छन् । अनावश्यक र दिक्कलाग्दो यात्रा हुनसक्छ । भोगविलासमा मन जानेछ । बन्दव्यापारमा समेत सोचेजस्तो लाभ हुँदैन । ऋणसापटी लिनदिन आजको दिन अनुकूल हुँदैन । पारिवारिक जीवन निराशापूर्ण रहने छ । मकर (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) –
व्यवसायिक क्षेत्रबाट राम्रो लाभ प्राप्त हुनेछ । छोराछोरीबाट सन्तोष प्राप्त हुनेछ । साँझमा दिनभरिका क्रियाकलापको लेखाजोखा गर्न मन लाग्नेछ । बुद्धिपक्ष र प्राज्ञिक क्षेत्रमा राम्रो छ । कामधन्दा र व्यवसायका लागि काम गर्ने राम्रो वातावरण बन्नेछ । बौद्धिक क्षमताको प्रस्फुटन हुनाले सृजनात्मक सफलता मिल्नेछ । कुम्भ (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द) –
घरायसी वातावरणमा केही असामान्यता देखिन सक्छ । परिवारभित्रका झिनामसिना काममा धेरै समय खर्चनु पर्नेछ । मनमा देखिने अस्थिरता अधैर्यताका कारण निर्णायक क्षमतामा कमी आउने छ । कामधन्दामा अर्काको भर नपर्नु नै राम्रो हो, मित्र, सहयोगी र नातागोताको साथ पाइँदैन । कुनै नयाँ काम गर्नुछ भने जान्नेबुझ्ने वा ठूलाबडाको सहयोग लिनु राम्रो हुन्छ । मीन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) –
प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ । प्रतिस्पर्धीहरूले हार खानेछन् भने सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनेछन् । दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा रोकिएका काम बन्न सक्छन् । थोरै लाभ भए पनि ठूलो आवश्यकता पूरा हुनेछ ।साथीभाइसँगको सम्बन्ध आत्मीय बन्नेछ । हाँकेको÷ताकेको काममा आफन्तहरूले राम्रो सहयोग र सद्भाव प्रदान गर्नेछन् । Loading...
Breaking_News: आइजीपी नियुक्तिमा बिबादस्पद बनेपछि देउवाको नजर अब प्रधानन्यायाधिश माथि, प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने अन्तिम कसरतमा कांग्रेस सभापति देउवा
नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक प्रकरणमा तेस्रो बरियताका जयबहादुर चन्दलाई नियुक्ति गर्नबाट रोकेपछि नेपाली...
आजको राशिफल – मिति वि.सं. २०७४ साल बैशाख १४ गते बिहिबार तदानुसार इश्वी सन् २०१७ अप्रिल २७ तारिक (हेर्नुहोस भिडियो)
आजको राशिफल – मिति वि.सं. २०७४ साल बैशाख १४ गते बिहिबार तदानुसार इश्वी सन् २०१७ अप्रिल २७ तारिक
फेरी ह्वात्तै घट्यो डलर रेट, हेर्नुहोस कति छ आज बिहिबार डलर लगायत सम्पूर्ण बिदेशिमुद्राको विनिमयदर ?
Exchange Rate for 27 April, 2017
कहाँ पुग्यो डलर तस्करी आरोपमा पक्राऊ परेका क्याप्टेन सुवर्ण अवाले काण्ड ? आजको पावर न्युजमा (भिडियोसहित)
कहाँ पुग्यो डलर तस्करी आरोपमा पक्राऊ परेका क्याप्टेन सुवर्ण अवाले काण्ड ? आजको पावर न्युजमा (भिडियोस...
हराएका ताइवानी ५५ दिनपछि जीवितै उद्धार,भोकले प्रेमिकाको तीन दिन अघि मात्रै मृत्यु (भिडियोसहित)
भुकम्प गएको दुई वर्षभित्र कलाकारले तीनवटा वस्ती उठायो तिनवटा सरकार आय तर सिन्को भाँचेनन (हेर्नुहोस भिडियो)
भुकम्प गएको दुई वर्षभित्र कलाकारले तीनवटा वस्ती उठायो तिनवटा सरकार आय तर सिन्को भाँचेनन (हेर्नुहोस भ...